करिब साढे तीन सय वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको चन्द्रविनायक तथा श्री भैरवनाथ जात्रा यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित गरिएको छ ।
जात्रा नभए पनि अमालकोटबाट हुने पूजालगायत मन्दिरभित्रका विधि भने पूरा गरिने जात्रा समन्वय समितिका संयोजनक नवीन गोर्खालीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीका द्वारेले पहिलो दिन चन्द्रविनायक मन्दिरमा विशेष पूजा गरेपछि जात्रा शुरु हुने परम्परा छ ।
प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमादेखि मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीयासम्म चार दिन पशुपति, जयवागेश्वरी, मित्रपार्क, चावहिल र चुच्चेपाटी क्षेत्रमा चन्द्रविनायक जात्रा मनाउने गरिन्छ । नेपाल संवत् ८०१ मा राजा भूपालेन्द्र मल्लले यो जात्राको शुरुआत् गराएको विश्वास गरिन्छ ।
जात्राको पहिलो दिन ‘मलजा नकेगु’ अर्थात् कुमार कुमारीको पूजा गरेर विनायकको प्रसाद खुवाउने परम्परा छ । चन्द्रविनायक उपत्यकाका चार विनायकमध्ये एक हो । चन्द्रविनायकलाई पशुपतिनाथको छोरा हो भन्ने धार्मिक मान्यता समेत छ ।
पूर्णिमाका दिन बेलुकी आज मन्दिर परिसरमा धुनी जगाउने विधिसमेत गरिनेछ । धुनी जगाउन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले दाउरा उपलब्ध गराउने परम्परा छ । मार्ग शीर्ष कृष्ण प्रतिपदाका दिन बिहान श्री चन्द्रविनायक र श्री भैरवनाथको खट उठाइन्छ ।
जात्राको दोस्रो दिन गणेशलाई ‘हलमली’ अर्थात् मकै, गहुँ, भटमास, सखरखण्ड, पिँडालु, लड्डु, पेडा र लावा चढाइन्छ । यी चढाइएका चीज प्रसादका रुपमा बेलुकी जात्रालु एवं भक्तजनलाई बाँडिन्छ । यसैगरी दोस्रो दिन श्री चन्द्रविनायक तथा श्री भैरवनाथको रथलाई मन्दिर वरपर घुमाई गङ्गाहिटीमा लगेर स्नान गराउने विधि छ । स्नानपछि दुवै खटलाई बेलुकी चारुमती बिहारमा लगेर बिसाइन्छ ।
मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वितीयाका दिन दुवै रथलाई पशुपतिमा लगी पिताको दर्शन गराएर त्यहीँदेखि चुच्चेपाटीसम्मका मूल चोकहरुमा घुमाउने जात्रा विधि छ । बेलुकी भने चारुमती बहालमै रथ नचाई टसी अर्थात् बिमिरो प्रसादका रुपमा वितरण गरिन्छ ।
मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीयाका दिन बिहान अमालकोट कचहरीका द्वारेले श्री चन्द्रविनायक र श्री भैरवनाथलाई अबिर चढाएपछि जात्रा समापन हुन्छ । चार दिने जात्रा सफलतापूर्वक समापन भएको खुशीयालीमा तृतीयाका दिन दिनभर चावहिल क्षेत्रमा सिन्दूर जात्रा गरिन्छ ।
कोरोनाका कारण गत वर्ष चैतदेखि नै चन्द्रविनायक मन्दिर बन्द गरिएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
एक महिनामा मन्दिर पुनःनिर्माण सम्पन्न हुने काठमाडौँ महानगरपालिका–७ का अध्यक्ष शुद्धकुमार डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।
पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर मन्दिर खुला गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ ।
लिखित जवाफ पेश गर्न ओलीलाई सर्वोच्चको आदेश
बामदेव, माधब र झलनाथले मेरो पहिलो सरकार ढाले : प्रधानमन्त्री ओली
केही महिनाभित्र ओली स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ : प्रचण्ड
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सूचकको हत्या आरोपित सिआईबीद्वारा पक्राउ
सुमार्गीले भर्जिन आइल्याण्डबाट ल्याएको ४५ मिलियन डलर कालोधनको आशंका !
नेकपाका दुवै समूहका ५/५ जनालाई किन बोलायो आयोगले ?
प्रचण्ड-माधब खेमाको आन्दोलन रोक्न प्रहरीलाई अनुचित दबाब !
नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढेको, सुशासनमा चार तह खस्केको ट्रान्सपरेन्सीको निष्कर्ष
बस्नेतले सम्पादकको नामै लिएर धम्काएपछि नेपाल प्रेस युनियनको आपत्ति
ऐतिहासिक मुद्धा : प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखका मुद्दा एकै बेन्चमा